Olee na-eduzi ihe ICO na Switzerland - Blockchain News
Olee na-eduzi ihe ICO na Switzerland
Anyị na-amụta na Swiss iwu siri ike Goldblum na Partners, na-eje ozi na-ahazi nke ICO, otú kacha mma ka na-arụkọ ọrụ na European investors na hazie a iriba na Switzerland.
N'ihi gịnị ka ọtụtụ ndị na-eche banyere inwe ihe ICO na Switzerland
Na akụkụ nke a bụ a ụtụ ejiji – Ethereum Foundation, Tezos, esite, Lykke mere Switzerland na-ewu ewu na kaadị obodo, na Zug bụ ebe dị mma ka aha ụlọ ọrụ n'ihi na mma nke management na ụtụ isi.
The obodo ochichi-anabata bitcoins ka tax ịkwụ ụgwọ maka ruo 200 franc. Registration nke ụlọ ọrụ nwekwara ike rụrụ na iwebata BTC na ikike ego; na tax ochichi weere kaadị-ego ka ihe onwunwe na n'ụzọ kwesịrị ekwesị na-emetụta ụtụ isi.
Supervision, nduzi eme, ihe a chọrọ na-enwe a local director onye bụ ịgụnye maka ọrụ nke ike ma ọ bụ ego, ka Switzerland pụrụ ịdabere maka investors, kwere nghọta na ndị na-ahazi nke ICO na-akụda scammers.
Mgbe mbụ ogbo, anyị nwere ike ikwu na ndị na-ahazi nke ICO anya maka mmekọ ndị nwere ike itinye ego a nnukwu ego nke ego. Na mgbakwunye, mkpa ka ị na-eduzi Oke mkpachapụ anya echiche, ike a roadmap maka oru ngo a ga-aghọ akụkụ nke White Akwụkwọ, na ịzụlite okwu maka azụ ego n'ụdị Usoro na ọnọdụ, na-elele ihe ọmụma dị nkwado ihe na na ngosi maka nnabata.
E nwere a elu puru ịchọta ihe ọṅụ na usoro nke a na-akpọ Roadshow, nke na-agụnye na-ezipụ ndị amụma n'ihi na a nzukọ, ejide n'ihu, ịza investors’ ajụjụ na, n'ihi ya, anata ego. Nke a bụ otu ihe dị mkpa na-arụ ọrụ – zaa kasị tricky ajụjụ, ihu na ihu, ebe dịghị ajụjụ nke anonymity na-abịa.
Site na nkwekọrịta ndị na-ahazi, na a ogbo anyị nwere ike inye a ọkàiwu maka mbipụta dị ka otu onye ndụmọdụ ngo, na-aza iwu ajụjụ si ICO ahịa.
Mgbe isi investors na-hụrụ, anyị nwere ike ikwu malite ndebanye nke ụlọ ọrụ: ihe analogue nke LLC na a statutory enweta ego nke 20,000 franc, CJSC – 100,000 franc. Nke abụọ ahụ, niile nwere oke n'akụ na-amaghị aha. Ọ dịkwa ike ịzụta a njikere mere ụlọ ọrụ. ke ukem, ihe ukara arịrịọ ka n'ihi mkpa ikikere na regulator, mmalite akụkọ na anoghi n'ulo oba ma na-ahazi n'ikuku nke ego si obere investors.
All ego natara na ndị a nkebi bụ isiokwu ụtụ isi na njedebe nke akuko oge, na e nweghị ọdịiche dị site ọrụ nke tax ọchịchị na mba ndị ọzọ.
Ọ dị mkpa ka ike a enweta ego maka ICO na Switzerland ?
Dị ka a na-achị, ego na ebuwanye na òtù na-eji onyinye ma ọ bụ onyinye n'ihi na ụfọdụ mmemme na-adịghị metụtara azụmahịa eme ihe na-adịghị erite uru site n'ọrụ a.
Ọzọkwa: ego ahụ adịghị enye echiche ọ bụla azụmahịa ọrụ, anata ego si investors na-akwụ ụgwọ ha azụ na a ụgwọ ọrụ.
The akụkọ TEZOS, ndị na-ahazi nke adịghị natara ọ bụla nkọwa si ọkàiwu na Switzerland ma nara ego si investors n'ụdị onyinye, ụma ma ọ bụ na – na-na-doo anya na ọtụtụ ọnwụnwa, o doro anya na-egosi na ọ dị mkpa ka na-agụnye a ọkàiwu na niile nkebi nke abụọ. Rụtụ aka na ndị ọkachamara ndị nwere ike ịbụ maka na ha na-atụ aro ma ọ bụ omume.
Next Post:Mkpụrụ nke ASIC ibe site Samsung